Tarikhda Maysoonida Qaybta 6aad - Land Of Punt
Maysooniyadu inbadan bay soo waday qorshaha lagula wareego magaalda Jerusalem
Maysooniyadu inbadan bay soo waday qorshaha lagula wareego magaalda Jerusalem iyo nawaaxigeeda ee buurta Zion. Tariikhda waxaynu ku haynaa 2000 sano hadii anay ka badnayn inay wadeen shaxada inay mar uun soodegan Jerusalem kurtin iyo geed dheerba way ugu soo gabadeen gacankuhaynta maamulka magaalada lakinse rag uunba ka hortaagna. Maysooniyadu niman iska socda maha waxay ku shaqeeyan qorsheyaal si mugleh loo rogrogay. Inta isku fekerka ah ee kala maysooniyada, saynuuyinta, kiristanka cusub, Zionist churches, Evangelist, protestants iwm waxay talada kama danbaysta ka qaatan wadaada Yahuuda “Pharisees” Kitaab waxaa Talmuudka iyo Kabaala oo isna ah kitaab meel dhexe lagu alifay.
Kooxdan wadasocda oo ubadan xuluf kiristan ah iyo yahuud waxay aminsanyihiin inuu Nabi Ciise dunida kusoo laabandono oo taladii Yahuuda boqortooyadi ay lahaanjiren soonoqoto oo dunida laga maamulo Jerusalem sidii wakhtigii dahabiga “The Golden Age” ee boqortooyada Nabi Suleymaan dunida haysatay. Wakhti Hore – Jerusalem Magaalada caanka ah Jerusalem “Al-Qudus” (Dhul nabadeed) asaaskeda waxaynu ku koobayna Nabi Yacquub iyo anbiyadii kadanbeeyey ee dhamaantod kasoo jeeday dirkiisa. Maalin maalmaha kamid ah ayuu Yacquub dhinaca dhulka yare dhigay kur layidhaahdo ZION intuu dhagax suluxa barkaday.
Nabi Yacquub wuxuu arkay oo ku riyooday salaan samada lagasoo laadladiyey oo malaaig kasoo degayso. Waa markii ugu horeysay ee albaabka samadu ka furmo dhulka baraysan. Koobtaa iyo dhagaxii uu barkaday wuxuu noqday dhaqaxdhigii Jerusalem (Genesis) ee samaawiga ahaa. Dhisida iyo hirgalinta magaalada Jerusalem taarikhdu waxay siinay Taalut “Saul” oo ahaa boqor iyo rasuul wadasocda oo reer bani isreal loosodiray. Yahuuda inay dib isu abaabulan oo iska dhiciyaan Falastiiniyiinta ayuu dalabkeeda kuyimi Saul. Falastiiniyinta ayaa wakhtigaa gacanta sare lahayd oo dulmiga waday. Reer bani isreal arinkoodu wuxuu ahaa duco ay Ilaahay ku waydisanayaan inuu ka dulqaado dhibka reer falastiin iyo sheeg/wadhaf. Ilaahay ducadii reer bani isreal wuu ka aqbalay waxaan loo sodiray Taalut (Saul).
Waxay ilatahay in Falastiiniyinta maanta iyana Ilaahay ka aqbalidoono oo gargaar losodiro doono meeshu doonoba haka yimaade. Saul oo Ilaahay reer bani Isreal udooray inuu unoqdo boqor iyo rasuulba way horyimaden laandheerihii reer bani Isreal baa wax saluugay wadaadki waday (Samuel) arinkana waa lagu gacan saydhay waxay kudooden waa laangab oo waliba nusyar. Ma kaasa nagacelinaya falastiiniyiinta. Waxay gaadhen heer ay Saul ku yidhaahdan bal hadii aad runsheegaysid oo arinka nabinimada iyo boqornimadaada wax ka jiraan waxaa keenta sanduuqi guusha (Tabut) ee awooyashen sidanjireen. Waxaa ulaaban oo quluubtoda ka guuxaya in Sanduuqa barakaysan aan cidna mala awaalikarin oo cadayn buuxda unoqonaya rasuul nimadaada. Waxaa iyaga ugasii muhiimsan oo laabtoda ka guuxay in hadii lahelo Sanduuqa (The Ark of Covenant) guushu banaanka tahay guuleysan. Waa ta maanta haysata ee reer bani isreal ka maqan ee ay meelkasta isugu qaaden sidii loo helilahaa Sanduuqan. Waata keentay waalidooda in wax Alle uun ogyahay gobolada Somaliland qaar kulasoo galgashaan. Sanduuqi lagu xujeeyey boqor Saul subaxii danbe ayaa loogu horyimi isagoo yaal guriga boqorka hortiisa. Qisada dhexmartay reer bani isreal iyo rasuulki Taalut cs Alle wuxuu inoogu sheegay Quraan (surat Al-Maida) laba malag ayaa keenaya Sanduuqa barakaysan waxaan lagu wareejinaya boqorka.
Reer bani isreal markii ay arkeen waxay ku khasbanaaden inay adeecan boqor Saul, wuxuuna u horseeday guulo iyo inay dhulkii dibu qabsadaan oo la asaaso magaalda Jerusalem (Bethlem). Ilaa boqor Taalut (Saul) ilaa nabi Suleiman barwaaqo sooran ayey reer bani isreal kunoolayen waa wakhti aan tarikhdooda kusoo laaban doonin abid. Waa wakhtigii lamagacbaxay wakhtigii dahabiga ahaa “The Golden Age”. Wakhtigaa waxaa isku ladhnaa oo talada hayey feker diimiya (rassuul, Nabi) boqortooyo. Waa marka kaliya ee lahelo barwaaqo socota iyo nabad waarta. Intii taldu gacanta ugujirtay ambiyada isdhalay Taluut, Daaud iyo Suleiman (cs) ee uu Sanduuqa barakaysan meesha yaalay reer bani isreal dariiqa saxda ah iyo iney Alle caabudan kamay leexan. Dhibku wuxuu yimi markii ay fasahaad la yimadeen ee ay ka leexden dariiqi anbiyada soo jireenka ahaa ee ay uleexden shaydaan raac ayuu Ilaahayna ku saladijiray ciqaab hadba nooc ugusoo degta mar samada dhagaxaan lagaga keeno iyo maruu Ilaahay ku salido cadow ka xoogweyn oo aanay iska celinkarin. Taarikhaha reer bani isreal leeyihin waxaa kujirta gumaystihii ugu horeeyey ee lagula kaco ee Baabiloon ee Abakhzanaar xooga ku haystay reer bani isreal. Wakhtigaa ay ku sugnaayen Baabilon ayaan aminsanahay inuu jabkoodu bilaabmay waxay dhex dabaashen cilmi laga xaarameeyey ehlul kitaabka. Waxay daabaceen kitaab isugujira Tooradii iyo sixirkii Baabiloon ay ugu tageen waxaana la qoray kitaabka Talmuudka oo iminka isticmaalan. Hadiiba arinkaas dhacay waxaa ku furmay albaab anay mahadin, cilmigii samaawiga ahaa ee aan bidco iyo waxna ku dhexjirin ee marka xaaladi ku timaado ay intay kala furaan oo ducaystaan Ilaahayna ka aqbalijiray uu ka shaashoobay.
Kitaabki Toorada ee Ilaahay Muse cs ugu soo dhibay ayey Talmuud ku badasheen waxayna iska xidheen albaabkii Yacquub furay ee samada. Diinti ehlulkitaabka ahayd waxay isubadashay khuraafad iyo inay ku dabada faylaan Ibliis iyo sixirooleyaal. Waata keentay Nabi Ciise oo Zakariye usiisheegay ee uu kuyidhi Ilaahay waxaad waydisateen inuu idinka furfuro Abakhzanaar waana laydinka furfuray oo Alle wuu idinka aqbalay, waxaa Ilaahay waydiisateen inuu Nabi idinsoo saro mid idingeeya halkaad niyada ku haysaan wakhtigii dahabiga “The Goldden Age” oo boqorna idiin noqda sidii nabi Suleiman. Waa laydinka aqbalay Ilaahayna boqor iyo nabi ayuu idinsoo diray markuu soo baxo raaca oo ha khilaafina. Nabi Ciise (cs) ayuu Ilaahay keenay oo cadaymahii nabinimadu udhantahay cod dheer iyo mid gaabanba wuu ku wacdiyey wuuna isusheegay xataa isaga oo sabi ah. Nabi Ciise way ka horyimaaden waxayna ku dooden inaanu ninkan ahayn oo aabo maleh, yacni waa garac. Nacladi haku dhacdo. Kambaynkii lagu fashilinayey waxaa waday wadaadadii reer bani isreal “Pharesee” kitaabka ay haystaana yahay Talmuud. Waxaynu ku doodaynaa in kitaabka Tora ee ladabakhay inuu keenay cilmigii rasmiga ahaa meesha ka baxay oo halkiisi lagu badalay cilmi lagasoo maanguriyey maska biniadam iyo ibliis oo markii hore saami kulahayn kutubta Alle saami laga siiyey. Markii meesha lagasaaray cilmigii saxda ahaa ee quluubtada ka ilaalinlaha waxaan loogu talogalin lagu badalay waxaa ka dhashey ina quluubta reer bani isreal kala saarikari waydoo waxyigii Zakariye ee saxda ahaa ee ilmaanta cad ka bixiyey Nabi Ciise iyo Ibliis khiyaamdisa. Waxaynu ku doodaynaa in wakhtigaa tarikhdanu dhacay in reer bani isreal mugdigu ubilaamay oo xataa laga wareejiyey cilmi samaawi iyo inta Ilaahay doortay, waa marka guul darooyinka rasmiga ah ubilaabmen. Wadaadi reer bani Isreal iyagoo kaashanayaan janaraalki boqortoyada Rome kasocday “Pontus Pilaus” oo ay ku yidhaaden hadii aanad daldalin Nabi Cise kacdoon baanu ku abaabul ayaa markii danbe isku dayey inuu Ciise ku daldalo Jirid. Wadaadada reer bani isreal “Pharasees” waxay iminka sugayeen Nabi Ciise ilaa 2000 sano waana aminsanyihiin oo kutubta Zakariye iyo nabi Yaxye ayaa wataan oo ku doodayaan inuu nabi Ciise imanayo oo xukumidoono oo boqor unoqondoono. Waxayna xisaabsaden inuu dhawaan soo bixidoon oo dunida Jerusalem ka xukumidono. Waxaa mooda inay isdhaafsanyihiin iyaga iyo Nabi Ciise.
Inuu soo baxay oo ay isku daydil sameeyen oo Allihii samaystay samada la aaday oo meeshiba nin Dajjal cawar layidhaah kujiro ayaanayba ka warhayn. Dajjal wuxuu yahayba waxaa inoo sii sheegay nabi Maxamed (cs). Nabi Maxamed (cs) wuxuu inoo sheegay in Dajjal aanu ahayn nin sahlan oo anibiyadii ka horeeyey oo dhami qoomkoda uga digijireen fidnadiisa. Waxaa laynoo sheegay in laba waalid oo reer bani isreal ay iska dhalidoonan inuu cawaranyahay oo isha midig ka cawaran yahay ayaa layno sheegay. Dajjal waa nin dhalinyaro ah oo dimo maroorsan leh jidhkiisu dhisanyahay. Wuxuu wataa awoodo ka baxsan ta biniadamka oo dunida ku fidnayndoona. Nabigeeni suubana wuxuu inoo sheegay inuu jasiirad ku xidhanyahay (e.g. Britain) hadii uu soobaxo anigaa (Maxamed cs) idinka celindoono hadii aanan joogin difaac iyo xijaab waxaad ka dhigataan Surat Kaf. Wuxuuna soo bixidoona Dajjal akhrizamanka wuxuuna dunida maamulidoona 40 cisho.
40ka casho maalin waxay udhigantaa SANAD, maalina BIL, maalinta 3aad waxay udhigmay WEEG. Malmaha kale ee soo hadha waa maalmaheena caadiga ah oo kale.Dajjal meeshan uu kasoo gelayo ee uu iska soo dhigayo Nabi Ciise cs ee lagu khalday reer bani isreal iyo masiixinta waa tarikhdan aan dinla wadaagay. Wuxuu ku matalaya oo iskasoo dhigaya inuu yahay masiixi maqnaa ee Ilaahay soo waday ee reer bani isreal xukumi lahaa boqorka dunida ka taliyana ku danbayn lahaa. Sababaha keenaya inuu soo raaco liidka Jerusalem wuxuu hadii uu Ciise kusoo matalo inuu ugu yaraan helayo kiristanka iyo yahuuda oo khuraadka ay sameeyen iyagu. Waa inuu layimaada intii uu la iminlaha Nabi Ciise ee la shaasheyey. Waa inuu isusoo eekaysiiya Ciise..
Tarikhda Maysoonida Qaybta 7aad